အမိုက်စား ကကွက်လေးတွေ နဲ့ ကပြနေ တဲ့ နေခြည်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် – Zartiman
မကြာသေးမီကလည်း နေခြည်ဦးဟာ သူမရဲ့ Tok accလေးမှာ အင်္ဂလိပ် သီချင်းမြူးမြူးလေးနဲ့ အမိုက်စားကထားတဲ့ ဗီဒီ ယိုလေးကို တင် ပေးလာပြန်ပါတယ်။ နေခြည်တစ်ယောက်ကတော့ သီချ င်း အတိုင်း လုံးဝစည်းချက်ညီညီနဲ့ ကနေတာပါ။ ကဲ. ….ပရိ သတ်တွေအတွက် နေခြည့်ရဲ့ tik tokဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….သွက်လက်တဲ့ အမူ အရာလေးတွေနဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ချစ်စရာဟန်ပန်လေးတွေနဲ့ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲမှာ နေရာတစ် နေရာရရှိလာတဲ့ နေခြည်ဦး ကိုသိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်။ သူမဟာ beauty bloggerတစ်ယောက်အနေနဲ့စတင်လာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ social influencer တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါရပ်တည်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင်ေ နခြ ည် ဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်းအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကား ကြီးတွေ၊ ဇာတ် လမ်းတွဲတွေထိပါ ‌ရိုက်ကူး လာနိုင်တဲ့သူ ဆိုလည်း မမှား ပါဘူးနော်။နေခြည်ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ဆောင် နေတာဖြစ်ပြီး အောင်ရဲလင်းနဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့။music video (၃)ခုဟာဆိုရင်လည်း အခုလ က် ရှိမှာဆိုရင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ နေခြည်ဟာ အားလပ်ချိ န်လေးတွေမှာ ဆိုရင်လည်း tik tokဗီဒီယိုလေးကို မျိုးစုံရို က်ကူးလေ့ ရှိ‌ပါေ သးတယ်နော်။
မကွာသေးမီကလညျး နခွေညျဦးဟာ သူမရဲ့ Tok accလေးမှာ အင်ျဂလိပျ သီခငျြးမွူးမွူးလေးနဲ့ အမိုကျစားကထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တငျ ပေးလာပွနျပါတယျ။ နခွေညျတဈယောကျကတော့ သီခြ ငျး အတိုငျး လုံးဝစညျးခကျြညီညီနဲ့ ကနတောပါ။ ကဲ. ….ပရိသတျတှအေတှကျ နခွေညျ့ရဲ့ tik tokဗီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ပရိတျသတျကွီးရေ….သှကျလကျတဲ့ အမူအရာလေးတှနေဲ့ အမြား နဲ့မတူတဲ့ခဈြစရာဟနျပနျလေးတှနေဲ့ပရိတျသတျတှရေငျထဲမှာ နရောတဈ နရောရရှိလာတဲ့ နခွေညျဦးကိုသိကွမယျ ထငျပါ တယျ နျော။ သူမဟာ beauty bloggerတဈယောကျအနနေဲ့စတငျလာခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ social influencer တဈယောကျအနနေဲ့ပါရပျတညျတဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ပွငျေ နခွ ညျ ဟာ မငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့လညျးအနုပညာလမျးကွောငျးပျေါရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး ရုပျရှငျကားကွီးတှေ၊ ဇာတျ လမျးတှဲတှထေိပါ ‌ရိုကျကူး လာနိုငျတဲ့သူ ဆိုလညျး မမှား ပါဘူးနျော။နခွေညျဟာ အနုပညာအလုပျတှကေိုဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျဆောငျ နတောဖွဈပွီး အောငျရဲလငျးနဲ့အတူ တှဲဖကျသရုပျဆောငျထားတဲ့။music video (၃)ခုဟာဆိုရငျလညျး အခုလ ကျ ရှိမှာဆိုရငျ ပရိသတျ တှကွေားမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျနျော။ နခွေညျဟာ အားလပျခြိနျလေးတှမှော ဆိုရငျလညျး tik tokဗီဒီယိုလေး ကို မြိုးစုံရို ကျကူးလေ့ ရှိ‌ပါေ သးတယျနျော။
စပွန်ဆာကြောင့် တိုက်နဲ့ကားနဲ့ ပိုင်သွားပြီလို့ ပြောဆိုသူအပေါ် ငွေဇင်လှိုင်း တုံ့ပြန်ပြီ